Ipa kubata kwako kuApple Watch nePhoto sphere uye neunyanzvi hwako | Ndinobva mac
Ipa yako Apple Tarisa kubata kwako neiyo Photo sphere uye neako kugona
Kuti iyo Apple Watch ndiyo wachi yandakafarira kupfuura zvese zvandakave nazvo mumakore angu makumi matatu nemasere hachisi chirevo chekuwedzeredza. Uku ndiko kunyepedzera kwangu kwechigadzirwa zvekuti pandino kanganwa kumba mubhokisi rekuchaja randakagadzira, ndinonzwa kuti pane chinoshaikwa.
Vanoverengeka ndivo vashandi pamwe navo Ndione ndichinakidzwa neangu Apple Watch zuva nezuva sezvo vhezheni yekutanga yakaburitswa vakanetseka kana chishandiso ichi chaikodzera kuve nacho. Ndakangopindura kuti kusvika wave nacho paruoko hauzive zvazvinonyatso kureva kupfeka uku pauri.
Mumwe wevashandi vekupedzisira akabatana nenyika ye Apple Watch Magüi Ojeda anga ari mumwe wangu, wangu «musikana», ndiyo nzira ine rudo yandinofanira kutaura nezvake kubva patakasangana. Ichokwadi ndechekuti kune Vakatatu Vakachenjera Varume akapa murume wake Apple Watch Series 2 uye paakaona kufara kwake newachi yaakasarudza, vhiki dzapfuura, kumutengera iye iyo 2mm Apple Watch Series 38 mugoridhe.
Kubva panguva iyoyo Magüi mumwe munhu uye ndezvedu, isu tiri kudzidzisa maawa mazhinji uye hatigone kutarisa kune nhare, kuitira kuti tigamuchire runhare rwakakosha kana meseji newachi. Tinogona kuve nerumwe ruzivo rwatinogona kutarisa tisina kukanganisa kirasi yacho.
Nhasi tanga tichitaura nezvekunaka kwake Apple Watch uye kuti anofara sei nazvo uye kamwe kamwe anondiudza zvinotevera:
Zvinosuruvarisa kuti hapana "mucherechedzo une bere" tambo yeangu yakanaka wachi! Neicho ini chandinoda "brand ine bere"!
Ini ndakakurumidza kumuudza kuti pane nzira iyo yake Apple Watch inogona kuva nebheya raanofarira marangi uye iri nekushandisa iyo bhora Photo uye kugadzira pikicha iyo yatichaisa muVadikanwi muKushandiswa kweMifananidzo kweiyo iPhone kuitira kuti iratidzwe mune akati nharaunda yeApple Watch.
Kuti ukwanise kuzviita, iwe unongofanirwa kugadzira iwo mufananidzo waunoda kuona pachiso chewachi yako nehukuru (312 x 390 pixels) uye chimiro. Kune izvi, chinhu chekutanga ini chandinokuraira iwe kutora skrini yeiyo skrini yeApple Watch yako, iyo iwe yaunofanirwa kunge uine iyo sarudzo inogoneswa kuburikidza neiyo iPhone Watch kunyorera mune inotevera nzira Tarisa> General> Activate screenshots.
Iye zvino zvawaita kuti screen capture dziitwe, unoita kubatwa nekudzvanya korona uye bhatani repadivi panguva imwe chete uye pa iPhone yako unenge uine kubatwa kweiyo Apple Watch skrini ine chakakosha chimiro. Iyo skrini ichaenderana neako Mac uye kana iwe ukavhura iyo Photos application pane yako Mac unenge uine iyo inowanikwa saka iwe unogona kugadzira chifananidzo kune chaunoda asi iine icho chikamu reshiyo.
Kugadzira iwo mufananidzo wandiri kutaura pamusoro pako unogona kushandisa zvirongwa zvakawanda. Ini ndakazviita nekukurumidza uye nyore kushandisa PowerPoint iyo yandakaisa kubatwa kwatakataura nezvayo, ndakagadzira montage ine chifananidzo chandinoda padhuze payo uye ipapo ndakaita kubatwa nekusarudza nzvimbo yeMac skrini kune iyo Ini ndakazopa saizi yaidiwa. Mhedzisiro yandawana ndiyo yandakuratidza mumifananidzo yandakanamira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ipa yako Apple Tarisa kubata kwako neiyo Photo sphere uye neako kugona
Chinyorwa chakanaka kwazvo. Zvakanaka kugona kuisa ako aunofarira dials pane yako Apple Watch.
Pindura kuna Magüi
Zviratidzo zvekutanga zveApple TV inomhanya ne tvOS 11 zvinoonekwa
Apple Mepu inogadziridza mifananidzo yeApple Park kuburikidza nesatellite